1001 bài thơ Sinh Nhật Buồn, status ngày sinh nhật cô đơn 1 mình | Anybook.vn - Anybook
1001 bài thơ Sinh Nhật Buồn, status ngày sinh nhật cô đơn 1 mình | Anybook.vn
(iini.net) Fanangonana tononkalo fitsingerenan’ny andro nahaterahana tsara indrindra sy mihetsiketsika indrindra. Mety ho tononkalo manirery tsingerintaona nahaterahana, tononkalo fitsingerenan’ny andro nahaterahana fahatsiarovana ny olon-tiana lavitra, na fitsingerenan’ny andro nahaterahana tsotra izao tsy misy fiarahabana sy fanomezana avy amin’ny rehetra…
Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana dia tsy mitovy ho an’ny rehetra, ny olona tsirairay dia manana ny fihetseham-pony. Noho izany, iini.net dia hanavao tsy tapaka ireo sangan’asa vaovao amin’ity lohahevitra ity, manantena ny hitondra ny fiaraha-miory ilaina aminao. Ary azonao atao koa ny manondro andian-dahatsoratra bebe kokoa tononkalo fitiavana mampalahelo izay iini.net nozaraina koa!.
tononkalo mampalahelo tsingerintaona nahaterahana (sary: ​​internet)
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #01
1 MANORATRA HO AN’NY fitsingerenan’ny andro nahaterahana
2 NY fitsingerenan’ny taonako
3 NANDAO ATAOVY NY FAHAtsingerin-taonan’ny anio
4 VUNG ANH fitsingerenan’ny andro nahaterahana
5 MOTIVATION NY MPITIAVAN’ANDRIAMANITRA HATRANY
6 FANATERAKA NY Malahelo
7 INONA NO TOKONY ATAO TSARA TSARA TSARA?
8 TRATRY NY TSINGERINTAONA NAHATERAHANA
MANORATRA HO AN’NY fitsingerenan’ny andro nahaterahana
Tononkalo: Ngoc Han
Tsapako ho manirery foana ireny fotoana ireny
Nahoana no mampalahelo ny zava-drehetra?
Te-handre ny bitsiky ny fitiavana
Maniry ny sain’olona iray ihany!
Tsy afaka mitsiky aho amin’ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana
Mieritreritra foana mba tsy ho feno ny hafaliana
Eo anatrehan’ny sain’ny namana maro
Mbola tsy afaka manamaivana ny nostalgia … ianao ihany!
Ny fitsingerenan’ny taonako, ny hafaliana dia marefo loatra
Toy izany aho … manidy ny tenako ao amin’ny efitrano banga
Fahatsiarovana taloha….ianao ihany no mitsikilo
Atsipazo ao amin’ny lavaka mangitsokitsoka ny fonao
Tsy ampy teny fitiavana io fitsingerenan’ny andro nahaterahana io
Tsy misy sandry, tsy misy lalana mankany amin’ny fahasambarana
Ianao irery ihany no manana alahelo
Ny kenda amin’ny tratra mahonena
Ity tsingerintaona ity dia tsy misy sampana voninkazo
Noho izany, ny fahasambarana dia tebiteby fotsiny
Izao no fotoana hijerena ny fiainana mamitaka
Manindrona ato am-poko, hoy aho … tsy maninona!
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #02
Tononkalo: Yen Binh
Anio no tsingerintaona nahaterahana
Malahelo ihany ny namana miara-mipetraka amiko
Mijery avy eny an-dalana… mijery ivelany
Mijere… miverena fa izaho irery
Mangina ny alahelo
Tezitra amin’ny fiainana na tezitra amin’ny irery
Ỷ oh mampalahelo oh mampalahelo oh mampalahelo
Eny, andao atao hoe POEM MAMPALAHELO
Teny vitsivitsy mampifandray ny namana manerana izao tontolo izao
Amin’ny taona manaraka dia ho avy ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany
Ny namana akaiky na aiza na aiza dia manome fanomezana tsy tapaka
Mofomamy misy voninkazo manerana
Niverina indray ilay tsiky feno hafanam-po.
tsingerintaona manirery (sary: ​​internet)
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #03
NY fitsingerenan’ny taonako
ENY! tsy niverina fa tsingerintaona nahaterahana ihany
Mipetraka miatrika sakafo mankaleo
Malahelo ny foko fa mitsiky am-pifaliana ny vavako
Ny alina ihany no mangina ka hadalana
ENY! Tsy miverina fa mbola mena ny fararano
Ny volana jolay dia mbola mivatravatra ny orana amin’ny tolakandro
Mbola mandihy ny rano mitete amin’ny sampany
Rahona malefaka, rivotra mitsoka, rahona mbola manidina
READ Trọn bộ những bài thơ chế độc lạ hài hước về tình bạn tình yêu | Anybook.vn
ENY! Tsy miverina, mbola matory tsara
Tsy mijanona ny fotoana
Lolo tsara tarehy amin’ny sampana voninkazo dia variana
Mitete ando maraina amin’ny felany raozy
ENY! tsy niverina niteny hoe tsia
Fa nahoana isika no malahelo be?
Mbola mihira sy mibitsibitsika amin’ny mozika ny vavako
ENY! Raha tsy izany dia mbola mavo ny masoandro.
***Ny andian-tononkalo dia mahita bebe kokoa: Misaotra anareo rehetra izay nandefa firarian-tsoa ho ahy
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #04
NANDAO ATAOVY NY FAHAtsingerin-taonan’ny anio
Tononkalo: Khai Tam
Eny, fitsingerenan’ny andro nahaterahana aho
Tena sahirana ny fiainana raha manadino
Ny valan-javaboary dia fihaonana mampalahelo
Ny ravina fararano dia mianjera eo amin’ny tokonam-baravaran’ny faniriana
Ny olona lavitra dia mihaino fahatsiarovana
Impiry ianao no maika?
Mitete-pahoriana no hipetraka haneho aminao
Fitiavana mitete, ranomasom-pahoriana, lena
Miandry mandrakizay ny fitsingerenan’ny taonako
Araho maso ny hatsarana lavitra
Ry lehilahy, nahoana ianao no manjavona?
Amin’ny hafatra tsirairay amin’ny alina, mandry am-pandriana mitaraina
Ny filentehan’ny masoandro dia nandao ny lalan’ny maizina
Misavoritaka efitra miandry miandry
Mampalahelo ny fiainan’ny takolany rosy
Ny henatra amin’ny anjara ody volafotsy dia levona haingana.
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #05
VUNG ANH fitsingerenan’ny andro nahaterahana
Tononkalo: tsy fantatra
Ity tsingerintaona ity dia tsy miaraka aminao aho.
Foana ny arabe fa maninona no mampalahelo.
Niezaka nifalifaly aho fa tsy afaka.
Manantona fotsiny amin’ny fahatsiarovana lavitra.
Ny mofomamy dia mbola tsy misy dikany.
Tsy misy miaraka amiko mizara zava-mamy.
Efa maty ny labozia kely nirehitra nandritra ny fotoana ela.
Miandry fahatsiarovana taloha aho.
Izaho koa efa nidodododo tamin’ny masoandro sy ny orana.
Mandehana miaraka amiko volana feno volana.
Mandraka ankehitriny dia lasa lavitra izy.
Ity tsingerintaona nahaterahana ity dia irery.
Manafina ny alaheloko amin’ny hazavan’ny volana aho.
Any amin’ny toerana lavitra, manantena aho fa azonao.
Mihorohoro indray ny foko.
Manoro hevitra anao aho mba hiandry ny vanim-potoana manaraka.
fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo (sary: ​​internet)
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #06
MOTIVATION NY MPITIAVAN’ANDRIAMANITRA HATRANY
Hampalahelo anao kokoa ny fahafantaranao ity andro ity
Irery miaraka amin’ny fahanginana mangina
Ahoana no hialana amin’ny alahelo voafandrika
Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany tany an-tany irery
Fantatro fa mahatsiaro ho manirery ianao izao
Tsy misy mofomamy, tsy misy fanomezana ary tsy misy labozia
Fa lavitra ry havana
Mbola mandefa fitiavana mangina
Tsy ao an-tanànako ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana
Mandehana eny an-dalana fotsiny azafady
Dia ho renao ny bitsiky ny rivotra
Vazivazy lehilahy, safosafo… tanana!
Aza malahelo ny ranonorana manidina
Aza tezitra amin’ny andro mifanalavitra
Firy ny fanamby eto amin’ity fiainana ity?
Koa ry rahalahy…aoka isika hatanjaka!
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #07
TSY FAHAtsingerin-taonan’ny Rahalahy
Tononkalo: Ilay mpirenireny
READ Những bài thơ tình viết về Biển, Em và Anh hay nhất | Anybook.vn
Nilatsaka mafy ny orana tamin’ny faran’ny herinandro
Mangatsiaka be ny tolakandron’ny ririnina, sa tsy izany?
Manao fety sambatra na alahelo eo akaikin’ny lamba
Tsy nanatrika aho rehefa tsingerintaona nahaterahanao.
Fanomezana tsy maika hanoratra teny vitsivitsy
Antsoy hoe fitiavana maharitra ho anao izany
Ny fanandratana vera feno hafaliana dia mampitsiry ahy
Tena malahelo aho mirary tontolo andro sambatra ho anao.
Ny zaridainako dia mamy toy ny faniriana
Tena mafana fo isaky ny miaraka
Malahelo ny ranomasina amin’ny alina, mbola mibitsibitsika ny onja
Fihino ny morontsiraka feno fasika
Tsingerintaona mampalahelo, aza mitomany
Omeo alahelo bebe kokoa aho, tsarovy
Aza mipetra-potsiny mijery ny ranomasina amin’ny alina
Fa tsarovy ny molotra mamy sy malefaka nomeko
Manorata lahatsoratra handefasana fihetseham-po lalina
Omeo fitiavana aho anio
Mifanome toky fa hisy andro iray
Tsy maniry intsony fa mamon’ny fahasambarana.
tsingerintaona nahaterahana irery (sary: ​​internet)
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #08
FANATERAKA NY Malahelo
Tononkalo: Mac Phuong
Ahoana no hanadinoanao io fitsingerenan’ny andro nahaterahana io?
Avelao ho irery aho amin’ny faniriako.
Ny faran’ny volana tsy vita faran’ny herinandro.
Tahaka ny fiainako very tamin’ny fiandrasana anao.
Ny tenako no nioty voankazo mamy fony aho mbola maitso.
Mba hankafy ny tsirony marikivy.
Noraisiko manokana ny raozy mena.
Ny fanomezana ny tenanao amin’ny nofy alina.
Nahoana aho no mahatsiaro ho malemy amin’ity fitsingerenan’ny andro nahaterahana ity?
Sasatry ny niandry ny tononkalo nosoratany.
Tsy voalahatra mialoha intsony ny tantaram-pitiavako
Saingy mbola namana tsara, sa tsy izany?
Maninona raha mandefa firariantsoa.
Mba hanamaivanana ny foko marary.
Mba hanasitranana ny ratra nandeha ra.
Miandry fatratra ny fitiavana nostalgia lavitra.
Na dia tsy afaka miray trano aza aho amin’izao fiainana izao.
Fa inona no maharatsy ny foko?
Nandefa fehezanteny haingana dia haingana ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana.
Mampahery koa ny mahatsiaro fitiavana.
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #09
INONA NO TOKONY ATAO TSARA TSARA TSARA?
Tononkalo: An Nhien
Ny rivotra dia mampitony moramora ny alina ho amin’ny fanadinoana
Sira manjavona ho an’ny lasa lavitra
Eny, nilaza taminao aho hoe avelao ianao, fa ny foko dia torotoro sy malahelo
Aoka ny alina hanala ny lokon’ny andro
Ny fonosana masira dia mandefa nostalgia amin’ny latabatra
Toy ny rahona mitsingevana aho izao
Ny lasa, mampanantena aho fa hadino
Nahoana no mampahatsiahy olona tsy tokony hahatsiaro?
Malahelo ve ianao rehefa tsy vita ny anjaranao?
Ny fahasambarana dia eo amin’ny lafiny roa samy hafa
Ny fametahana na avela, dia mbola miforitra ny paty
Efa antitra io finoana io.. nahoana no tonga lafatra?
Azonao ve ny fihetseham-ponao miafina?
Vendrana aho nefa kivy
Izay mitomany sy mitomany ao anaty orana
Nahoana no marefo ny fahatsiarovanao?
“Labozia inona no mandatsa-dranomaso amin’ny tsingerintaona nahaterahanao?
Mitsonika ao anatin’ny fahatsiarovana mandritra ny andro aho.”
Tantely ! Tsingerintaona nahaterahana iray hafa ho avy. Mbola faravodilanitra roa toy ny kintana hariva sy ny kintana maraina isika, na dia mitovy aza ny vahindanitra iray, dia tsy hihaona mihitsy. Miarahaba antsika tratry ny taona vaovao. Mitsiky foana ianao araka ny iriako anao anio. More kintana sy taratasy vano nofinofy ho azy.
READ Tập 10 Bài Thơ Về Thân Phận Người Đàn Bà Của Hồ Xuân Hương | Anybook.vn
sary tsara tarehy fitsingerenan’ny andro nahaterahana.
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #10
Tononkalo: Lang Thuy
Nahoana no mampalahelo kokoa noho ny isan-taona
Satria manana fiainana landy aho
Manenona landy ho tia olona.
Ary efa antitra ny vatako
Manantena aho fa misy olona mahatsiaro fa tsy ilainy izany
Eny ary, miarahaba tena
Tsy mila olona amin’ity fiainana ity.
Satria mampalahelo, tsy misy mahalala
Miova mangidy ny fon’ny olona
Manadino isika fa hanadino
Avelao ny renirano hilatsaka ho faly indray.
Tsy hisy hanenenana intsony manomboka izao
Hiaina ny fiainako sambatra
Ny tenin’ny rivotra sy ny rivotra dia maniratsira
irery. Mangina fotsiny aho.
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #11
TSY MISY FAHAtsingerin-taonan’ny mpiasa!
Mangatsiaka ve ny tany serizy ankehitriny?
Mitsoka mafy toy ny teo aloha ve ity monsoon ity?
Malahelo ny ranomasina ve ianao – izay niaraha-nandeha?
Mibitsibitsika ny onja: tafaray mandrakizay isika.
Raha tsy misy anao, ny onja tsy mahita ny loha volafotsy
Mifoka rivotra lalina ny alina, mirohondrohona ny ranomasina
Malahelo anao aho mihaino ny foko torotoro
Alina mahafinaritra feno firehetam-po.
Ny fitsingerenan’ny taonako tsy misy anao tsiro mangidy kafe.
Mirenireny irery miaraka amin’ny ranomasina foana aho
Tsapako tampoka ny tolona mandre ny fahatsapana lalina
Kenda mandrakizay, azonao ve ny fitiavako?
Mbola mihozongozona ny onja, mbola manga ny rano
Septambra tsy misy anao, ny lanitra dia marefo, nostalgia?
Ny ranomasin’ny tanindrazana amin’ny alina dia mamerina ny fofonainy
Mifoha amin’ny vanim-potoana iray … vanim-potoana fitsingerenan’ny andro nahaterahana tsy misy anao.
alina fitsingerenan’ny andro nahaterahana mangina.
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #12
TRATRY NY TSINGERINTAONA NAHATERAHANA
Tononkalo: Dam Quyen
Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana dia mipetraka mangina
Vakio ny fanirian’ny lalana efatra
Tsy haiko ny tarehy amin’ny tena fiainana
Fantasy izany malala!
Misaotra dadatoa a!
Rahalahy, anabavy, sakaiza tarehy!
Alefaso Happy Birthday
Feno kokoa ny fiaraha-monina!
Mitovy ny olona na aiza na aiza
Ny hatsaram-panahy dia toy ny isan’andro
Ry ranabavy malala, mahazatra … koa
Miaina ny fotoana rehetra aho!
Tsy hita fa ankamamiana
Tsy mahalala fa tokony ho akaiky
Toy ny hanitry ny lanitra sy ny tany
Mandalo any anaty ala!
Ny fanomezana dia mandrakizay!
Ataovy antitra haingana aho!
Alefaso ny lohataona tsy misy farany!
Toy ny voninkazo aho!
Tonga ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana!
Ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana!
Mipetraka irery aho
Enga anie ka tsy antitra ny Lohataona!
Tononkalo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana mampalahelo sy manirery #13
Vao avy nijery andiana tononkalo mampalahelo momba ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana miaraka amin’ny toe-po maro ianao. Havaozin’i iini.net hatrany ny famoronana vaovao. Raha manana zavatra hambara amin’ny tsingerintaona nahaterahanao ianao dia zarao aminay ao amin’ny boaty fanehoan-kevitra etsy ambany!
1001 tononkalo Sad Birthday, manirery sata fitsingerenan’ny andro nahaterahana irery
Previous: Các chủ đề thuyết trình hấp dẫn | Anybook.vn
Next: Yết Kiêu – Kho Tàng Truyện Cổ Tích Chọn Lọc | Anybook.vn